Tusaalooyinka naqshadaynta tifaftirka: waxa ay tahay iyo tusaalayaal kale oo aad u wanaagsan | Hal-abuurka khadka tooska ah
Tusaalooyinka naqshadaynta tifaftirka
Jaantusyada qaabeynta, ama samee shabagyo fudud oo caawiya sarraynta muuqaalka saxda ah ee qoraallada ayaa ah qaar ka mid ah furayaasha naqshadaynta tifaftirka.
Taasi waa sababta Naqshadeeye tifaftireedka wanaagsan wuxuu u baahan yahay in hibo u yeesho qoraalka iyo nashqadaynta badan waayo labadooduba way wada socdaan. Maqaalkan waxa aynu si qoto dheer ugu sii wadi doonaa naqshadaynta tifaftirka iyo sida ay u saamayso maalinteena maalinlaha ah ama shaqada shirkada iyo suuqgeynta.
Intaa waxaa dheer, haddii ay dhacdo in ay ku filnaan waydo, waxaanu sidoo kale ku tusi doonaa tusaalooyin waxaanan kuu soo jeedin doonaa talooyin si aad u noqoto khabiir.
1 Naqshadaynta tifaftirka
2 Tusaalooyinka naqshadaynta tifaftirka
2.3 New Yorker The
3 naqshadeeyayaasha tifaftirka
Xigasho: Nakhshad sawireed iyo isgaarsiin
Naqshadaynta tifaftirka, sida ereygeedu tilmaamayo, waa farsamo qayb ka ah qoyska ballaadhan ee fanka garaafyada iyo naqshadaynta garaafyada guud ahaan. Waa qayb ka mid ah nashqada tan inta badan ka mas'uul ah dejinta iyo naqshadaynta wax kasta oo khuseeya qaybta daabacaadda.: joornaalada, waraaqaha waraaqaha, buug-gacmeedyada, kaadhadhka ganacsiga, boodhadhka, iwm.
Naqshadeynta tifaftirka waxay joogtaa mar kasta oo aan furno buug si aan u akhrino ama mar kasta oo joornaal ku yaal shelf maktabadda ay dareenkayada qabtaan oo aan go'aansanno inaan akhrino. Taasi waa sababta curiye kasta oo ka kooban dabool buug. sidoo kale waa qayb ka mid ah naqshadaynta tifaftirka. Sidaa awgeed xidhiidhka ka dhexeeya naqshadaynta garaafyada iyo naqshadaynta tifaftirka. Naqshad isku dayaysa in ay gudbiso oo ay gaadho akhristeyaal badan.
Sidaan horey u soo sheegnay, naqshadeynta tifaftirka waa dhammaan walxaha muuqaalka ah ee aan ku aragno in lagu saadaaliyay daboolka majaladda ama buug-gacmeedka, waana sababta naqshadeynta tifaftirka loo qaybiyay:
Fonte: Waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee naqshadeynta, Hagaag, waa midda isku dayi doonta inay soo jiidato dareenka akhristaha maadaama ay noqon doonto mid ka mid ah walxaha ugu horreeya ee ay arkaan. Taasi waa sababta qoraal-ku-qoristu ay door aad u muhiim ah u leedahay, maadaama ay lagama maarmaan tahay in la ogaado qoraal-gacmeedka ugu habboon xaalad kasta. Tusaale ahaan, ma habboona in lagu daro far gacanta lagu qoray si wax loo akhriyo mar haddii aanay ahayn kuwo aad loo akhriyi karo, laakiin qoraalka guud waxay ahaan lahayd.
Sawirka ama sawirka: 50% ee naqshadeynta iyo in kasta oo ay u ekaan karto wax suubban, haddana shaki la'aan waa waxa tilmaamaya dareenka ugu badan ee akhristaha. Waa muhiim in nashqadeeyaha uu yaqaano nooca sawirka ama sawirka uu isticmaalo mar walba iyo gaar ahaan in ay leedahay tayo iyo muuqaal midab ku filan si aad u daabacdo dambe ama u fiirsashada shaashadda.
Grid: Shabaggu waa shay jaleecada hore uu yahay nidaamka ugu muhiimsan iyo laf dhabarta naqshadeynta, mar haddii ay tahay waxa taageera dhammaan curiyeyaasha oo u dhigaya si ay muuqaal ahaan isku xiraan oo ay u dheelitiran yihiin. Waxaad dooran kartaa barnaamijyada sida InDesign si aad u abuurto noocyadan kheyraadka.
Bartilmaameedka: Waxaa laga yaabaa inaadan rumaysnayn halkan, laakiin sidoo kale waa lagama maarmaan in la sameeyo baaritaan si loo ogaado gacmihii hore ee dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee aan la macaamileyno. kahor naqshadeynta waa lagama maarmaan in la ogaado cidda aan la hadlayno si ay u awoodaan in ay u gudbiyaan fariinta si uun ama si kale.
Waxaa jira naqshado tafatir oo badan oo la sameeyay taariikhda oo dhan. Qaybtan waxaan kuugu daynaynaa liiska majaladaha taariikhda galay magac ahaan iyo qaabaynta daboolkooda. Waxaa muhiim ah in aad fiiriso sida loo qeybiyo curiyayaasha, nooca xarfaha ay adeegsadaan iyo sida ay ugu ciyaaraan sawirka iyo qoraalka.
Majaladda Life waa mid ka mid ah majaladaha ugu caansan xilligan, laakiin gaar ahaan ururintan Beatles ee la qorsheeyay 1964. Waxa soo jiidatay dareenka ugu badan ee majaladdan ayaa ah in sawirada uu sawiray Henri Cartier laftiisa - Bresson.
Waa hubaal mid ka mid ah tusaalooyinka halka sawirku wuxuu noqdaa dabeecadda ugu weyn qoraalkuna waxa uu ka ciyaarayaa door labaad oo jaldiga ah. Markaa muhiimadda, sida kor ku xusan, ee walxaha sida sawirada ama sawirada.
Marka la soo koobo, waa naqshad wanaagsan in lagu dhiirigeliyo.
Xigasho: National Geographic
Majaladaha National Geographic waxay ahaayeen tusaalayaal kale oo aad u wanaagsan halkaasoo sawirku uu noqon karo jilaagii daboolka majaladda. Xaaladdan oo kale, majaladda lafteedu waxay gashay fayras ka dib muuqaalka gabadha caanka ah ee Afgaanistaan ​​Sharbat Gula. Sawir 180 darajo gaddoomay oo boqol qof oo dunida dacaladeeda ku kala wareegay.
Waa mid ka mid ah wargeysyada ka kooban sawirada ugu wanaagsan ee ay sameeyeen sawir qaadayaasha ugu fiican adduunka. Shaki la'aan waa mid ka mid ah fursadaha ugu wanaagsan ee lagu dhiirigelinayo.
Xigasho: Fasalada Saxaafadda
New York waa mid ka mid ah joornaalada ugu caansan New York. Ma aha oo kaliya in magaceeda lagu dhawaaqay dhammaan qaybaha adduunka, laakiin naqshadaheeda daboolka ayaa galay taariikhda. In kasta oo laga tashaday arrimo siyaasadeed iyo dhacdooyin wax ka beddelay taariikhda adduunka, Waxay adeegsadaan sawiro muujinaya masiibada warka.
Isticmaalka sarbeebaha dhambaalka oo dhan waa muhiim, majaladdani waxay tusaale u tahay. Haddii aad xiisaynayso inaad isticmaasho sawiro ka baxsan sawirada, majaladdani waa ikhtiyaar fiican oo lagu dhiirigaliyo.
Majaladda Time waa mid ka mid ah joornaalada ugu saameynta badan Ameerika, si aad ah, si ay u naqshadeeyaan ururin gaar ah oo aan sawir lahayn, kaliya cinwaan weyn ayaa la muujiyay. "Ilaah ma dhintay?" Shaki la'aan waa mid ka mid ah naqshadaha halkaas oo qoraal-ku-qoris uu noqdo jilaa, waana sababta ay lagama maarmaan u tahay in nashqaddeedu ay la socoto macnaha guud ee farriinta.
Asalka madow iyo midabka cas, ka dhig jaldiga in uu akhriyaha ku dhex abuuro xiisad iyo sir gaar ah. Waa tusaale wanaagsan haddii aad raadinayso naqshad qoraal ah.
David Carson wuxuu caan ku yahay adduunka oo dhan inuu ku jilo naqshad gaar ah oo loogu talagalay majaladda RayGun. Isagu waa mid ka mid ah naqshadeeyayaasha sida fiican ugu wanagsan tan iyo markii uu ku guuleystey in uu isku daro walxaha garaafka sida qoraalada iyo sawirka, isla markaana, maareeyo gudbinta fariinta muujinta. Shaki la'aan, waa tusaale cad haddii waxa aad raadineyso ay tahay naqshad aan la taaban karin oo leh hodannimo muuqaal wanaagsan iyo faham wanaagsan. Intaa waxaa dheer, Xaqiiqo cajiib ah oo ku saabsan xirfaddiisa farshaxanimo waa in muddo dheer ka hor inta uusan fanka ahayn uu ahaa agaasime filim, wax ka caawiyay inuu si ka sii badan u shaqeeyo dareenka iyo dareenka.
roger waa mid ka mid ah aabayaasha naqshadeeye joornaalka ugu sarreeya adduunkaLiiskeeda naqshadaha daboolka ah waa mid ballaaran waxaadna hubtaa inaad taqaan qaar ka mid ah: Rolling Stone, The New York Times, Newsweek, McCall's, Reader's Digest, Esquire, National Enquirer oo ka mid ah wargeysyo kale oo badan. Qodobbada ugu fiican ee ka muuqda shaqadiisa ayaa shaki la'aan ah isku-dhafka saxda ah ee midabka iyo qoraalka. taasoo soo jiidata dareenka akhristaha. Waa il wanaagsan oo dhiirigelin iyo halabuur leh haddii aad rabto oo keliya inaad ku shaqeyso oo keliya oo keliya laba ilo garaaf.
Magaciisu wuxuu u badan yahay inuu u eg yahay mid aad taqaan, maadaama uu yahay mid ka mid ah farshaxannada iyo naqshadeeyayaasha kuwaas oo ka mid noqday taariikhda iyada oo ay ugu wacan tahay naqshadihiisa. Waxay shaki la'aan noqotay astaanta muhiimka ah ee dhaqanka fanka waana hubaal inaad ogaan doonto Waayo, mashruucyadiisii ​​midabo badan lagu shubay iyo muujinta shuqulladiisa aawadeed. Shaki la'aan waa sawir-qaade aad u fiican oo xitaa qaar badan oo ka mid ah shaqadiisa ayaa lagu daabacay shaarar badan ama dhar, gaar ahaan naqshadda caanka ah ee Waxaan jeclahay New York, naqshad heer sare ah haddii aad tahay dalxiise.
Farshaxankii sanadka ee Ciyaaraha Olombikada ee Barcelona 92 ayaa la waayay, wuxuu caan ku yahay naqshadeynta mascot Games Olympic, Cobi. Intii uu ku guda jiray mashruuciisa Isbaanishka, waxa uu sidoo kale sameeyay boodhadh, farshaxan, calaamadeyn, boodhadh, sheeko garaafyo, animation, shaleemo, alaabta guriga, naqshadaha, baakadaha, naqshadaynta tifaftirka iyo xitaa qurxinta. Waa mid ka mid ah tixraacyada Isbaanishka ee la raaco haddii aad jeceshahay adduunka sawir-qaadistaWaxa kale oo aad eegi kartaa shaqooyinkooda, maadaama ay yihiin kuwo hal abuur leh oo bixiya taabashada shakhsiyadda lagama maarmaanka u ah mashaariicdaada si ay u aqoonsadaan dadwaynaha.
Marka la soo koobo, naqshadeynta tifaftirka ayaa hoos ugu dhacday taariikhda naqshadeynta shaqooyinkeeda badan, si ay u noqoto liis aan dhammaad lahayn si ay u muujiso mid kasta oo ka mid ah shaqooyinka la qorsheeyay inta lagu jiro waqtigan oo dhan. Waxa kale oo muhiim ah in aad si cad u qeexdo waxyaabaha ugu muhiimsan iyo kuwa sare marka la naqshadeynayo daboolka ama guud ahaan mashruuca naqshadaynta tifaftirka.
Waxaad sidoo kale diiwaan gelin kartaa naftaada wax ku saabsan Saul Bass, Neville Brody, Stefan Sagmeister, Yuko Nakamura, Jessica Walsh iyo kuwo kale oo badan.
Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay naqshadeynta tifaftirka, waxaanan kugu martiqaadeynaa inaad sii wado baaritaanka wax badan oo ku saabsan naqshadeeyayaasha qaarkood ee aan horay u soo sheegnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tusaalooyinka naqshadaynta tifaftirka